Askar Kenyan ah oo xalay lagu dilay magaalada Gaarisa
Rag hubeysan ayaa toogasho ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska Kenya xilli ay kusii jeedeen goobtooda shaqada.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska magaalada Gaarisa Herman Ndiema, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in laba askari la dilay mar ay kusii socdeen Kuleejka Farsamada halkaas oo ay waardiye ka ahaan jireen.
Kooxaha dilka u geystay ayaa marka hore saartay baabuur Taxi ah kadibna inta dileen ay tuureen baabuurka, sidoo kale waxa ay ka qaateen qoryihi ay wateen sida uu sheegay Mr. Ndiema.
“Waxaan ku tuhmeynaa dad ka tirsan Al Shabab in ay ka danbeeyaan weerarka waxaana mari doonaa dariiq kasta si aan u soo qabano iyaga,” ayuu yiri.
Weerarkaasi ayaa dhacay xilli shalay bam gacmeed lagu weeraray kaniisad ku taala magaalada Nairobi halkaas oo ay ku dhinteen caruur kuwo kalana ku dhaawacmeen.
Kenya ayaa waxaa ruxay mowjado weeraro u badnaa bambo gacmeedyo tan iyo marki ay ciidamadeeda u dirtay Soonaaliya bishi October ee sanadki hore si ay u bursadaan Al Shabab.
(Daawo)Xaalada Kismaayo iyo Alshabaab oo kawada cararay
Magaalada kismaayo ayaa marqura faarujiyey alshabaab faarujisay waxeey kentay in dhac iyo boob bilaabmo waayo magaalada malaha wax askar ah oo dhanka doolada dadkana in muda waxaa saarnaa ey cunaqabateyn baa saarneed,
hadaba halkan ka daawo iyadoo laga sameyey warbixin xaalada magaalada iyo siyaabihii alshabaab looga soo saaray soomaliya.
Maleeshiyaad la wareegay Xaafado ka tirsan Kismaayo iyo boob socda
Maleeshiyaad hubaysan ayaa la sheegay inay la wareegeen Magaalada Kismaayo, iyadoo dhinaca kale Magaalada uu ka socdo dhac ay wadaan qaar ka mid ah dadka shacabka ah.
Sida ay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah, Maleeshiyo hubaysan ayaa dhex wareegaya gudaha Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoose.
Maleeshiyaadka ayaa la sheegay inay yihiin kuwa hubaysan, waxaana ay la wareegeen Xaafado dhowr ah oo ku yaalla gudaha Magaaladaasi sida ay sheegayaan dadka deegaanka ah.
“Maleeshiyaad badan ayaa wareegaya gudaha Magaalada, Xaafado badan ayay joogaan oo ay la wareegeen, cabsi badan ayaa jirta” sidaasi waxaan kasoo xiganay qof ka mid ah dadka deegaanka ah.
Dhinaca kale gudaha Magaalada Kismaayo ayaa wali waxa ka socda dhac baahsan oo ay gaysanayaan shacab ku nool halkaasi, iyagoo ku buxay Xafiisyadii Al Shabaab oo ay shanta sano ka Maamulayeen gudaha Magaaladaasi.
“Dadka dhinac ayay boob ka wadaan, bililiqo ayaa socota, Xaafadaha qaar waa laga barakacay, waayo dhacii ayaa ku batay, Magaalada Maleeshiyo ayaa joogta, Guryaha ayaa la isugu galayaa oo waliba waa la is dhacayaa” sidaasi waxaa noo sheegay dadka deegaanka ah.
Tan iyo markii Al Shabaab ay ka baxeen Magaalada Kismaayo Ururka Al Shabaab waxaa lagu dilay 9-ruux oo ay ku jiraan Odayaal iyo waxgarad ku dhaqan halkaasi, waxaana la ogeyn go’aanka ay Ciidamada Dowladda iyo kuwa Kenya ay ka qaadanayaan arrintaasi.
Dad xalay lagu xir xiray Baydhabo
Howlgalo ay ciidamada Dowlada Soomaaliya xalay ka sameeyeen magaalada Baydhabo ayey kusoo qab qabteen dad u badnaa dhalinyaro.
Sida ay sheegeen saraakiisha booliska ee magaalada, howlgalada oolaga sameeyey xaafadaha qaar ayaa waxaa lagu soo qab qabtay dad gaaraya 24 ruux kuwaasi oo loogaga shakisanyahay in ay ka tirsanyihiin Xarakada Al Shabab.
Arrintaan ayaa ka danbeeysay kadib marki shalay lagu toogtay magaalada Baydhabo sarkaalDowlada hoose u qaabilsanaa qaadista canshuuraha, kaasi oo ay dileen rag ku hubeesnaa bistoolado.
Amaanka Baydhabo ayaa maalimihi ugu danbeeyey hagaagsanaa, inkastoo todobaadkan uu jiray qarax ka dhacay halkaasi.
Baydhabo ayaa waxaa maamula Dowlada Soomaaliya, waxaana amaanka ka kaalmeeya ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya.
Roobabka Deyrta oo ka curtay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya
Roobab lagu diirsaday ayaa xalay ka da,ay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfur galbeed Soomaaliya.
Roobabkan ayaa si wanaagsan uga da,ay degmooyinka Balad Xaawo, Dooloow, Luuq iyo tuulooyn badan oo ku hareereysan halkaas oo uu biya dhigay, dadka iyo duunyadana ku diirsadeen.
Sida ay dadka deegaanka xaqiijiyeen, roobabka ayaa xoogooda da,ay xalay inkastoo meelaha qaarna ay ka bilowdeen shalay galab.
Waxay kusoo aadayaan xilli ay dadka beeraleyda iyo xoola dhaqatada si weyn ugu baahnaayen roobka si ay uga faa,ideestaan.
10-ki maalin ee lasoo dhaafay ayaa jawiga Muqdisho iyo Shabeelooyinka uu aad u kululaaday si aanan horay loogaga baran, waxaana xaraaradu ay maalmahan aheyd 32 degree ee cabirka kuleelka, halka bilowgi September iyo bilihi ka horeeyey ay xaraarada jawaiga u dhaxeysay 25-28.
Dadka wax ka yaqaana arrimaha xilliyada ayaa sheegaya in marka sidaan ay hawada u kululaato xilliyada roobabkana fooda la galiyo badanaa uu ka da,o Soomaaliya roobab ay dadka ku qabowsadaan.
Wafdi Dowlada uga qeybgalay Shirki Golaha Guud ee QM oo dalka dib ugu soo laabtay
Waxaa maanta dalka dib ugu soo laabtay wafdi uu hogaaminayo Ra’isulwasaaraha waqtigiisu dhamaadayC/wali Gas, kadib marki ay kasoo qeybgaleen shirki Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Ogaysiis Muhiima:- Somali National University Of Buhodle (SNUB)
Jamaacada Ummadda Soomaaliyeed Ee Buuhoodle (SNUB)
Waxaa loogu bushaaraynayaa loo la ogaysiisanayaa dhamaanba dadka reer Buuhoodle in la furay Jamaacadda magaceedu kor ku xusan yahay sanad Jaamacaddeedka 2012-2013.
Waxaa sharaf iyo magacba inoo ah in ay Buuhoodle hormuud ka noqoto dib u soo noolayntii aqoontii tayada lahayd ee Jaamacaddii umadda soomaaliyeed lagu yaqiinay, si aynu ula jaanqaadno isbedelka cusub ee siyaasadeed ee dalka ka dhashay isla markaasna uga soo kabano dib u dhacii muddada dheer ina saameeyey ama inagu habsaday.
Jaamacadda maadooyinka lagu baranayo waxaa kamid ah (Degree Courses) sida:-
1- Caafimaadka (Medicine And General Surgery).
2- Ingineerimo oo kala A- Dhismaha, B- Computer iyo Isgaadhsiinta.
3- Taba tabarka Macalimiinta heer Jaamacaddeed.
4- MSIT (Management Science And Informatio Technology).
Fiiro Gaar Ah:- Mudooyinka Lagu qalin jabinayo waa 6 Sano oo Caafimaadka ah, 3 Sano MSIT iyo 4 Sano oo inta kale ah.
Wixii faah faahin dheeraad ah kala xidhiidh Prof. C/laahi Maxamed Saciid Tell: 4083733
Xoogaga Al-shabaab oo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ka bilaabay hareeraha magaalada Kismaayo
Ugu yaraan 20 askari ayaa ku dhimatay qaar kale oo intaa ka badana wey ku dhaawacmeen dagaalo goos goos ah oo shalay galab ilaa xalay ka dhacay degaano ku yaala duleedyada magaalada Kismaayo kuwaasoo dhexmaray ciidamada huwanta iyo kuwa Al-shabaab.
Dhamaan dadka ku dhintay dagaaladaas iyo kuwa dhaawacmayba waxay ka mid ahaayeen dhinacyada dagaalamay, waxaana dagaaladu ay ka dhaceen degaano kala duwan, iyagoo u badnaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo xoogaga Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada huwanta.
Iska horimaadka ugu kululaa uguna khasaaraha badnaa ayaaa ka dhacay inta u dhexeysa tuulada Canjeel iyo magaalada Kismaayo oo 30 Km isku jira, markii ciidamada huwanta oo ka soo dhaqaaqay tuuladaas kuna soo jeeday Kismaayo wadada loo galay, waxaana halkaas ka dhacay dagaalo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Sidoo kale degaano ku yaala duleedka woqooyi ee Kismaayo ayaa waxaa ka dhacay iska horimaadyo aan sidaa u buurneyn oo labada dhinac u dhexeeyey, iyadoo lagu soo waarmayo in askari ka tirsan ciidamada dowlada uu dhintay markii ay ku qaraxday miino ay Al-shabaab ku aaseen meel jid ah oo uu doonayey inuu soo saaro.
Ciidamada huwanta ayaa weli fadhiya degaano ku yaala duleedyada woqooyiga iyo Koonfurta magaalada, iyagoo aan weli gudaha u gelin magaalada Kismaayo oo 24 saac ka hor ay baneeyeen xoogagii Al-Shabaab ee magaalada ka talin jiray, lamana oga illaa hadda xiliga ay gudaha u galayaan magaaladaas.
Madaafiic lagu garaacay Kismaayo iyo Kenya oo sheegtay in xoogag ka tirsan Al-shabaab ay weli ku jiraan
Madaafiic xoogan ayaa xalay saqdii dhexe waxaa la sheegay iney ku soo dhaceen bartamaha magaalada Kismaayo ee gobolka jubada hoose xili magaalada 24 saac ka hor au ka baxeen xoogagii Al-shabaab ee maamulayey shantii sano ee la soo dhaafay.
Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa sheegaya iney maqlayeen daryanka madaafiic ku dhowaad gaareysa oo ku soo dhacaya bartamaha magaalada qeybo ka mid ah, waxaana meelaha sida gaarka ah loo xusay ee madaafiicdaas ay ku habsadeen ka mid ah dhismayaal ku yaala agagaaarka isbitaalka iyo meelo kale.
Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas oo loo badinayo iney ka soo dhaceen dhinaca ciidamada huwanta ee magaalada daafaheeda fadhiya inkastoo ay jiraan warar aan la hubin oo sheegaya in maraakiib dagaal oo fadhida xeebaha kismaayo laga soo ganay madaafiicdaas.
Shacabka magaalada Kismaayo oo cabsi badan ay heysato ayaa sheegay iney la yaaban yihiin sababaha ciidamada huwantu ay madaafiicda ugu soo garacaayaan magaalada xili xoogagii la dagaalamayey ee Al-shabaab ay magaalada ka baxeen habeen hore.
Gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka Kenya Faarax Macalin ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weli ku jiraan magaalada Kismaayo kuwasoo damacsan ayuu yiri iney weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaadaan ciidamada huwanta marka ay magaalada galaan.
Dhinaca kale, Xaalada magaalada B/weyne ayaa saaka degan inkastoo fowdo iyo kala dambeyn la’aan ay ka jirto, waxaana magaalada xalay lagu dilay qof kale oo rayid ah ka dib markii ay toogteen kooxo hubeysan, taasoo tirade dadka magaalada lagu laayey 24kii saac ee tegay ka dhigeysa ilaa 9 ruux, waxaana dadka intooda badan ay sheegeen iney guryahooda iska joogaan
Maxay ciidamada Isgarabsanaya u gali la,yihiin Kismayo ?
Waxaa saakay xasiloon xaalada guud ee Magaalada Kismaayo kadib marki ay xalay dadka ku waabariisteen isagoo meesha ka maqan maamulka Al Shabab.
Mudo sadex sana ah kadib Al Shabab waxa ay isaga baxeen Kismaayo shalay aroorti hore taasi oo u muuqata mid albaabka u xaareyso in ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada ay qabsadaan.
Hase yeeshee su,aasha taagani ayaa ah maxaa ka hor istaagsan in ay qabsadaan ciidamada isgarabsanaya fariisimihi ay farujiyeen Al Shabab, su,aashaasi waxaa ka jawaabay Abaanduulaha Ciidanka Milatariga Dowlada Soomaaliya, General Dhagabadan.
“Horta ciidamada isma soo wada gaarin, waxaa kale oo aan warbixin ku heynaa in dhulka dhan uu wada miineysanyahay gaar ahaan meelihi ay dagi lahaayeen ciidamada Dowlada, amaankana marka hore la sugo, marka waxaan qabnaa magaalada marka hore in shacabku xasilo aanan xabado ka dhicin,” ayuu yiri.
Mar uu ka jawaabay su,aal aheyd ciidamada Dowlada waxaa uga badan Kismaayo kuwa Jabhada Raaskambooni ayuu sheegay in waxa Kismaayo qabanaya ay yihiin Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada Soomaaliya, isla markaana uusan aqoonin wax la yiraahdo Urur ama Jabhad.
“Anaga waxaan rabnaa qaab Dowladeed in aan howsha ku qabano waxaad sheegeyso waxba inooguma jiro, ciidankeenu waa 3,000 oo askari wax urur la yiraahdana ma jiro waa ciidanka Dowlada, ayuu yiri.
Ciidamadi Al Shabab ayaanan wali la ogeyn halka ay aadeen, waxaana dadka deegaanka ay dhagaha u taagayaan xaalada magaalada iyo waxa ay la imaan doonaan ciidamada AMISOM iyo Kuwa Dowlada.
Faarax Macalin: Milatari ahaan waan ka guuleysanay Al Shabab
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka dalka Kenya Farax Macalin ayaa sheegay in Kenya ay ka go,antahay in ay gacanta ku dhigto Kismaayo.
Wareysi uu siiyey mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayuu Faarax ku sheegay in ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ay hada guulo ka gaareen dagaalada Kismaayo isla markaana ay qorsheynayaan in ay gudaha u galaan.
“Milatari ahaan waan uga guuleysanay Al Shabab, waxaana kuu sheegayaa in ciidankayagu ay qabanayaan Kismaayo kuna wareejinayaan Dowlada Soomaaliya,” ayuu yiri Faarax Macalin oo ah siyaasi ka tirsan Dowlada Kenya kana soo jeeda Soomaalida ku nool Waqooyi Bari Kenya.
Shalay war kasoo baxay wasaarada gaashaandhiga Dowlada Soomaaliya ayaa loogu baaqay ciidamada in aysan ku fududaan in ay gudaha u galaan magaalada Kismaayo sababo xaga amaanka ah.
Maxay ka tiri Dowlada Soomaaliya duulaanka Kismaayo
War kasoo baxay ku simaha Ra’isulwasaaraha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa ka hadlay xaalada magaalada Kismaayo.
Shir jaraa,id oo uu saxaafadda ugu qabtay Muqdisho ayuu kaga hadlay arrimaha Kismaayo iyo Fatahaadii wabiga Shabelle ee Magaalada Baladweyn, iyo Amniga magaalada Muqdisho.
(Dhagayso) Mid kamid Ah Qoysaska Dan Yarta Ee Ku Dhaqan Degmada Taleex Oo Si Weyn Uga Dayrinaya Xaalada Caafimaad Ee Ay Ku Sugan Tahay Gabadh Yar Oo Ay Dhaleen
Mid kamid ah qoysaska dan yarta ee ku dhaqan Degmada Taleex oo ka tirsan Gobolka Sool ayaa si weyn uga dayrinaya xaalada caafimaad ee ay ku sugan tahay gabadh yar oo ay dhaleen, iyagoona sheegay in gabadhoodan yari ay u geeyeen dhakhaatiir aad u tira badan kuwaas oo ku sugan gudaha dalka balse waxba laga qaban kari waayey xaaladeeda caafimaad. Sidoo kale qoyskani dan yarta ah ayaa sheegay in aysan haatan awoodin qarashaad ay ku geeyaan gabadhoodan yar dhakhaatiir kale xaaladooda dhaqaale oo aad u liidata awgeed.
Aabaha gabadhani dhalay oo lagu magcaabo C/xakiin Qodax Maxamed ayaa ka warbixinaya sida ay u xanuunsan tahay gabadhoodan yari, iyo waliba xiligii la haleelay. Hadaba warbixintaas oo dhamaystiran halkan hoose ka dhagayso.
Waa markii ugu horaysay ee Degmada Taleex iyo Deegaanada hoostagaba laga arko xanuun la garan waayo, iyagoona qoysankani aysan awoodin in ay dhakhaatiir dambe ay dib u geeyaan gabadhoodan yar maadaama ay yihiin qoys dan yar ah hadaba waxa ay walaalaha muslimiinta ah qoyskani dan yarta ah ka codsanayaan inay gacan ka siiyaan sidii ay dhakhtar ugu qaadi lahaayeen gabadhoodan yar, walaal la bax oo ku caawi walaalahaaga dhibaataysan wixii karaankaaga ah adiga oo ugu soo hagaajinaya xafiiska wararka ee Shabakadda Jornalizem.com Buuhoodle ama Lambarkan 0025224166248, Walaal xusuusnow wixii aad alle dartii aad u baxsato ayaa aakhiro kaaga horeeya.
Shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen Madaxweynayaasha Maamulka Khaatumo State ee kala ah Madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Halac (Indhasheel) iyo Madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) ayaa waxa ay kaga hadleen faragelin ay sheegeen in Maamulka Puntland uu ku haya Deegaanada Maamulka Khaatumo, iyagoona sheegay in Maamulka Khaatumo State uu san u dulqaadan doonin faragelinta uu ka wado Maamulka Puntland qaybo kamid Gobolada Sool iyo Cayn kadib markii ay Deegaanadaasi ay soo gaadheen mas'uul ka tirsan gudiga doorashooyinka Maamulka Puntland, kuwaas oo iyagu doonaya ayey yiraahdeen inay ka duubtaan filimo ay ku maxaabsadaan in Gobolada Sool, iyo Cayn ay ansixiyeen amaba taageereen axsaabta Maamulka Puntland uu u gudbi doono, waxa ayna digniin u jeediyeen madaxda Maamulkaas.
Hadaba waxaa ugu horeynba halkaasi ka hadlay Madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac (Indha sheel) isagoona ugu baaqay Maamulka Puntland inuu faragelinta ka daayo Deegaanada Maamulka Khaatumo State.
Sheekh Fu'aad Shongole oo Shacabka Kismaayo ka yaabsaday iyo qaar ka tirsan ciidamadiisa oo laga shakiyay (Top News)
Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf (Shongole) oo ka tirsan masuuliyiinta ugu sareeysa xarakada Al Shabaab ayaa si cajiib ah waxa uu uga yaabsaday Shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. Maalmo yar ayaa ka soo wareegtay markii uu Fu'aad Shongole kula taliyay Shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay Hubkooda qaataan dabadeedna iska dhiciyaan Cadawga isku soo baheeystay.
Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf (Shongole) wuxuu Shacabka Kismaayo si toos ah uga balan qaaday in uu Dagaalka la geli doono oo isla mar ahaantaana uu tagi doono furinta hore ee Dagaalka.Taas ma dhicin oo Fu'aad Shongole 2 maalmood ka dib wuu iskaga soo baxay furinta hore ee Dagaalka wuxuuna mudo 3 cisho ah ku sugan yahay deegaan hoos yimaada magaalada Jilib.
Hadal heeynta ugu badan gudaha magaalada Kismaayo ayaa noqotay Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf (Shongole) oo furinta dagaalka geeyay maalmo ka hor qaar ka tirsan ciidamadiisa qaaska ah kuwaas oo loo bogi waayay qaabka ay ula socdaan Sheekhaan oo amaankiisa aad loo adkeeyay .
Fu'aad Shongole wuxuu ka tirsan yahay raga Mareeykanka uu dul dhigay Malaayiinta Dollar waxaana sii xoogeeystay kala shakiga ay kala qabaan Masuuliyiinta ugu sareeysa Xarakada Al Shabaab kuwaas oo ehel u nuqday bil kasta in ay isku shaandheeyaan Waardiyaashooda qaaska ah.
Shacabka degan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxa ay aad ula yaabeen Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf (Shongole) oo Jihaad kama dambeeys ah ku baaqay balse maalmo yar ka dib lagu arkay isaga oo ku sugan deegaano Nabad ah oo magaalada Kismaayo aad uga fog.
Fu'aad Shongole dagaalkii Muqdisho ilaa kii Ceelasha Biyaha iyo Afgooye waxa uu ku baaqi jiray in uu Jihaadka iyo furinta dagaalka dadka uga hor mari doono balse hadaladiisa ayaa noqday inta badan kuwo aan dheg jalaq loo siin maxaa yeelay waxaa shaqsigaan mar kasta lagu arkaa goobaha Nabada iyo meelaha loo qaxiyo qooysaska taageersan Xarakada Al Shabaab (Jilib & Baraawe).
Saraakiisha ciidamada huwanta oo sheegay iney saacadaha soo socda galayaan magaalada Kismaayo
Saraakiisha ciidamada huwanta ee ka dagaalamaya gobolada Jubooyinka ayaa sheegay iney saacadaha soo socda galayaan, lana wareegayaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ka dib markii xalay ay halkaas isaga baxeen xoogagii Al-shabaab ee gacanta ku hayey.
Jen. Ismaaciil Saxardiid taliyaha ciidamada dowlada Somalia ee gobolada Jubooyinka ayaa sheegay in ka bixitaanka Al-shabaab ee magaalada Kismaayo ay tahay guul taariikhi ah oo ay gaareen ciidamada dowlada Somalia iyo kuwa taageeraya ee AMISOM.
“Al-Shabaab iskagama bixin Kismaayo ee ciidamada qalabnka sida iyo kuwa taageeraya ee AMISOM baa ku qasbay iney ka baxaan magaalada, ka dib markii ay shalay ka soo degeen xeebaha koonfur iyo woqooyi ee Kismaayo ayna xireen jidadkii waaweynaa ee ka baxayey magaalada oo qaarkood sahaydu ay u mari jirtay” ayuu intaa ku daray Jen. Saxardiid.
Sidoo kale, Jen. Ismaaciil Saxardiid ayaa sheegay in ciidamada huwanta ay saacadaha soo socda gudaha u geli doonaan, iskuna balaarin doonaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose, isagoo uga digay dadweynaha boobka ka wada magaalada iney joojiyaan bililaqada.
Dhinaca kale, hogaamiyaha ururka Raaskambooni Shiikh Axmed Madoobe ayaa sheegay in dagaalkii Kismaayo uu dhamaaday Al-shabaabna lagala wareegay, isagoo xusay in xoogagii Al-shabaab ee ka baxay xalay Kismaayo ay tageen degaanada Goobweyn iyo Buulo guduud ayna halkaas kaga daba tegi doonaan.
Saraakiil ka socda sirdoonka magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa habeen hore saqdii dhexe xabsiga u taxaabay wariye C/fataax Maxamuud Caydiid oo ka tirsan wargeyska Saxafi oo kasoo baxa magaalada Hargeysa.
Xarakada Al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday maanta in xalay la xiray xafiisyadii maamulkoodu ku lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, balse ay ciidamadeedu diyaar u yihiin inay la dagaalamaan cid walba oo kasoo horjeedda ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Dowlada Kenya oo ku dhowaaqday in ay qabsatay magaalada Kismayo
Magaalada Kismayo ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa saaka waxaa ka soconaya dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada huwanta ah iyo ururka Alshabaab.
Xaafado kamid ah magaalada Kismaayo ayaa lagu soo waramayaa inay u suurtogashaay ciidamada huwanta inay gacanta ku dhigeen kadib markii saaka waaberigii ay ciidamo ka soo degey maraakiib dagaal ay gudaha u galeen qeybo kamid ah magaalada Kismaayo.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan hase yeeshee waxaa la soo sheegayaa in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo.
Ciidamada Kenya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ay ka wadeen magaalada Kismaayo duqeyn xagga cirka iyo badda ah waxaana haatan uu dagaalku gaaray gudaha magaalada Kismaayo.
Shacabka ku haray magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in aysan garanayn meel ay u dhaqaaqaan ayna albaabada xirteen oo qura kadib markii saaka lagu waabariistay rasaas ka dhacaysa gudaha magaalada Kismaayo.
Xaafadaha magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku fatahay webiga Shabeelle, kaddib markii xalay uu magaaladaas ka da'een roobab xooggan oo geystay khasaare dhimasho oo soo gaartay dad iyo xoolo nool.
Dagaal fool ka fool ah ayaa lagu soo waramayaa in uu ka bilowday duleedka magaalada Kismaayo, dagaalkaas oo ay isaga soo horjeedaa ciidamada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa Kenya oo saaka maraakiib uga soo dagay dhanka xeebta Cceeldhiig ee magaalada Kismaayo iyo xoogagga Al-shabaab.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku eedeeyay Ciidamada Militariga inay ka dambeeyaan falal ammaan darri ee ka dhaca Muqdisho.
Max’ud Axmed Nuur (Tarsan) Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku ee deeyay Ciidamada Militariga ee Dowladda Soomaaliya in ay ku lug leeyihiin falalka ammaan darri oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray Magaalada Muqdisho.
Imaaraadka Carabta oo ku booriyay in la tayeeyo Ciidamada Somaliya
Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqay Dowladda cusub ee Soomaaliya in la dhiso Ciidamada qalabka sida si ay u hantaam ammaanka guud ee dalka.
Safiirka Dowladda Imaaraadka Carabta u qaabilsan Qaramada Midoobay iyo Hay’adaha Caalamiga ah Cabiid Saalim Al-Zacaabi oo hadal ka jeedinayay Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay kullan ay ku lahaayeenka Magaalada Geneva oo looga hadlayay Xaaladaha bini’aadannimo ee ka jira dalka ayaa waxa uu sheegay in Dowladdiisa ay dhinac kasta ka taageeri doonto Soomaaliya.
Al-Zacaabi ayaa waxaa uu dhinaca kale ugu baaqay Dowladda cusub ee Soomaaliya in ugu horeyn ay dib u dhis ku sameyso Ciidamada ammaanka, si Dowladda ay u sal dhigato, oo awood buuxa ay ugu yeellato Xaqiijinta ammaanka dalka, loogana bad baado falalka ammaan darri ee inta badan ka dhaca dalka.
Ugu dambeyn Qunsulka Imaaraadka ee QM ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka in aan la hakin dadaallada gurmedka gar-gaar ee Caawimaadda looga fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee ay isku biirsadeen dhibaatooyika colaadaha iyo Macluusha.